Te-Hampiasa Wi-Fi Ankalamanjana Ao Rosia? Mila mampiseho Pasipaoro Na Kara-Panondro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2014 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, македонски, polski, Français, English
Hitaky pasipaoro hoan'ireo izay maniry hampiasa ny Onjam-pifandraisana (Wi-Fi) hoan'ny daholobe i Rosia. Sary namboarin'ny mpanoratra.
Tsy afaka hampiasa onjam-pifandraisana eny amin'ny toeram-bahoaka tsy fantatra anarana intsony ireo mpiserasera ao Rosia. Hitaky amin'ireo olona miditra Wi-Fi ankalamanjana eny amin'ny toerana be olona ny governemanta Rosiana mba hampiseho pasipaoro na ny kara-panondron'izy ireo. Hosoratana sy horaketin'ny mpamatsy tolotra aterineto, miaraka amin'ny vaovao momba ny fitaovan'izy ireo ny mombamomba ireo olona manokana. Araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao Rosiana, efa nanasonia ny didim-panjakana mifandraika amin'izany ny Praiminisitra Dmitri Medvedev (azo jerena ao amin'ny vavahadin-dalànan'ny governemanta ihany koa ny fehezan-dalàna feno).
Manery ireo tompon'ny toerana misy ny onjam-pifandraisana – toeram-pisakafoanana, toeram-pisotrosotroana, trano famakiam-boky ihany koa ny didim-panjakana mba hilaza amin'ny mpamatsy tolotra aterineton'izy ireo ny lisitr'ireo mampiasa ny aterinetony ho an'ny vahoakany, milaza ny anaran'izy ireo, ny adiresy sy ny laharan'ny karapanondro. Tokony havaozina isaky ny telovolana na maherin'izany ireo lisitra.
Nihevitra ny talem-pifandraisan'ny governemanta Rambler & Co, Matvey Alekseev fa somary hafahafa ity didim-panjakana ity, satria hita hatreny amin'ny zaridaina na eny an-dalambe mihitsy koa aza ny onjam-pifandrasaina (Wi-Fi), ka mahatonga ny famantarana fizika ho sarotra.
Sarotra tanterahina ny mamantatra ireo mpiserasera rehefa miditra aterineto amin'ny alalan'ny Wi-Fi eny amin'ny toeram-bahoaka izy ireo. Tsy mino aho fa hampiseho ny pasipaorony avokoa izay rehetra tonga ao amin'ny Zaridaina Gorky.
Midika ihany koa ny fitakiana handraketana ny tahirinkevitra manokana fa tokony hangataka fahazoan-dalana “hikirakira tahirin-kevitr'olona manokana” amin'ny Roskomnadzor na mandòa onitra raha tsy mahavita izany ireo toeram-pisotroana na zaridaina.
Mihevitra ireo manampahefana ara-panjakana, na dia izany aza, fa tena ilaina tokoa ilay lalàna, satria ahafahana mametra ireo tetidratsy ataon'ireo olona ahiahiana amin'izao vanim-potoanan'ny ” adim-panomezam-baovao” izao. Hoy i Vadim Dengin, filoha lefitra voalohany ao amin'ny komitin'ny Douma misahana ny politikam-panomezam-baovao, ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana:
Miresaka fiarovana isika. Misy ny adim-panomezam-baovao amin'izao fotoana izao. Ahafahana manatontosa zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'ny tsy fisaziana ny fidirana aterineto miafinafina eny amin'ny toeram-bahoaka. Mety ho sarotra tanteraka ny mahita izay olona meloka. Matahotra ady ny Amerikana, dieny izao dia tsara ho azy ireo ny mihantsy ady eo amin'ny tontolom-baovao. Namafisin'izy ireo ny fanohizana ny “Voice of America (Feon'i Amerika)”. Miezaka manemitra ny habaka amin'ny mpisoloky, fasista sy ny extremista ireo liana amin'ny fanakorontanana. Tokony hanana famantarana manokana izay zavatra rehetra ao anaty aterineto.
Manaraka ny dian'ireo Sovietika mpifanolo-bodirindrina aminy sasany teo aloha, tahaka an'i Ozbekistan izay efa mitaky koa ny mombamomba ny mpiserasera amin'ny fidirana aterineto ankalamanjana i Rosia, maminavina izay ho heverin'i Kremlin manaraka no azontsika atao satria vao maika fatra-piahiahy kokoa mikasika ny aterineto mety ho maimaim-poana ireo manampahefana ao aminy.